Imveliso yokuhambisa, abaxhasi - Abavelisi base China abaThengi
ZG feeder eshukumayo
K uthotho lokuphindaphinda kumxhasi wamalahle
Uthotho lwe-HGM lusebenze ukungcangcazela kumalahle
Umxhasi we-Electromagnetic vibration feeder
I-czg kabini ubunzima be-feeder
ICypB eyondlayo yediski yediski
Isithuthi sokuhambisa esilahliweyo senziwe ngenxalenye yentloko, umzimba weetanki ophakathi, inxenye yomsila, ikhonkco lokuhambisa iscraper, isixhobo sokuqhuba kunye nebhedi yokufaka. Isakhiwo esivaliweyo ngokupheleleyo, akukho ukuvuza kwezinto ngexesha lokusebenza; Ikhonkco lokuhambisa lamkela itsheyini yokuhambisa, ifomathi yohlobo olunye lobeko; ukungeniswa kunye nokuthunyelwa ngaphandle kwezixhobo, ubude bokuhambisa bunokuyilwa ngokulula kwaye bulungiselelwe ngokweemfuno zenkqubo.
Ububanzi be-LS yohlobo lwe-screw conveyor yi-100 mm- Ubude obuphezulu bomatshini ojijwayo wedrive onokufikelela kwi-40m (ngaphezulu kwe-30m). Lo matshini drive kabini iqhosha lemenyu isebenzisa isakhiwo shaft ezaphukileyo phakathi, kwaye ubude ubuninzi ukufikelela 80m (60m super enkulu).
Ukuhanjiswa kwe-SCG yokuhambisa
I-SCG uthotho lokuhamba kweqondo lobushushu eliphezulu lokuhambisa izinto zisetyenziswa kakhulu kwimigodi, isinyithi, izinto zokwakha, amalahle, ishishini lamachiza, ingqolowa, amayeza kunye namanye amashishini. Ubushushu bungaphantsi kwama-300 ℃ kuzo zonke iintlobo zomgubo, igranular, ibhloko kunye nomxube wazo.
Idilesi: Icandelo lasentshona le Taihang kwindlela esemantla, indawo yophuhliso lwezoqoqosho eXiaoji, isixeko i-xinxiang, iphondo lase henan.